Ahoana no hametrahana ny vokatra Amazon toy ny mpivarotra pro?
Tsy ilaina ny milaza fa ny mpivarotra isan-karazany dia tokony hahafantatra ny fomba hametrahana ny vokatra Amazon mba hahafahan'izy ireo mijanona any an-tampon'ilay fikarohana. Midika izany fa ny fisainana ambony dia ny hany fomba tokana hialana amin'izany, satria ny fampivoarana ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao dia afaka mahazo ny vokatrao mivantana eo anoloan ny mpihaino anao eo.Koa, etsy ambany dia hasehoko anao ny fomba hametrahana ny vokatra Amazon toy ny mpivarotra tena mpividy. Andao hiantefa haingana amin'ny alalan'ity dingana manaraka ity amin'ny torolalana fitarihana.
Ahoana no hametrahana Amazon Products
Dingana voalohany: Fantaro ny fototry ny tanjona
Andeha hiatrika izany - Ao amin'ny Amazon dia samy hafa tanteraka amin'ny iray izay nananantsika tamin'ny fitaovam-pikarohana lehibe tahaka ny Google. Midika izany fa ny mamantatra ny teny fototra tianao ho lasibatra sy mamorona ny lisitra voalohany ho azy ireo dia mila mampiasa ny fitaovana Keyword Planner Google ianao - voalohany sy lehibe indrindra. Amin'izany fomba izany, ianao dia tsy hamorona ny lisitry ny adiresy votoatin'ny vondron'olona mba hiara-miasa, fa mahazo ny sary lehibe amin'ny fironana ankapobeny amin'ny fampiasana teny filamatra.
Dingana Faharoa: Fadio ny lisitra maintanao ao amin'ny lisitra farany
Raha vantany vao nahazo ny lisitry ny teny fototra tianao ianao dia fotoana kely hanaovana azy. Midika izany fa tsy maintsy mamolavola azy ao anatin'ny lisitry ny lisitra fohy izay ahitana ny tsara indrindra amin'ny teny fototra tsy maintsy mandresy sy ny tsikombakomba momba ny vokatra efa ela. Amin'izany fomba izany, manoro hevitra aho amin'ny fampiasana ny iray amin'ireto fikarohana sy soso-kevitra manaraka ireto ho an'ny Amazon mpivarotra. Aza misalasala manandrana ny iray amin'izy ireo - indrindra satria nanandrana azy ireo aho ho an'ny tetikasam-pandraiketako manokana amin'ny Amazon. Na izany na tsy izany, dia ianao ihany no manapa-kevitra hoe iza no tokony horaisina.
Sellics - Ity mpanampy an-tserasera ity dia tena ilaina tokoa ho an'ireo dingana voalohan'ireo fikarohana fototra nosoratanao. Raha izaho kosa dia nampiasa Sellics aho nandritra ny sehatry ny atidoha. Ary ny zava-drehetra dia tsotra - ny zavatra rehetra nilaiko dia ny miditra roa amin'ireo teny fototra tena tiko, ary mahazo fanampiana amin'ny soso-kevitra sasantsasany sasantsasany sy ireo toro-hevitra mahasoa, izay nalaina mivantana avy amin'ireo mpifaninana indrindra amin'ny fifaninanana niche / sokajy ho an'ny Amazon.
Sonar - dia tena nahasoa ahy raha mbola tsy nahafantatra aho hoe ahoana no hametrahana ny vokatra amin'ny Amazon toy ny pro. Raha tsorina, ity fitaovana fikarohana ity dia ahafahan'ny mpivarotra Amazon rehetra hahita ireo teny manan-danja sarobidy sy ireo tsikombakomba lava ilaina mba handaminana ny vokany. Toy ny sariohatra Keyword Sellics, dia mila tenimiafina iray tokana fotsiny ny Sonar mba ho fenoina mba hanomezana anao ny fitenenana maimaim-poana tsara indrindra, voakasik'ireo metrika sasantsasany izay manan-danja, toy ny salan'isa fikarakarana fikarohana, ny fironana ankehitriny ampiasaina, sns Source .